10 Arin oo ay qasab tahay inaad ka ogaato go’aankii Wasiirada looga mamnuucay Facebook & Twitter – XAMAR POST
10 Arin oo ay qasab tahay inaad ka ogaato go’aankii Wasiirada looga mamnuucay Facebook & Twitter
By Mohamed Ahmed On Aug 29, 2017
Saameynta Warbaahinta ee Bulshada ayaa lagu tilmaamaa awooda ugu sareysa ee ay adeegsadaan dawladaha caalamka ka jira maanta si ay u helaan taageerada Bulshada ugana hortagaan mucaaradka iyo dhaliilaha dadweynaha.
Xukuumada Khayre waxaa lagu tilmaamaa tan ugu adeegsiga badan Xukuumadihii soo maray dalka warbaahinta, gaar ahaan Baraha Bulshada, ilaa durba loo bixiyo magacyo la xiriira adeegsigaas sida; dawlada Facebook-ga, dawlada Twitter-ka, dawlada igu sawir, dawlada ku dayo iwm.
Adeegsiga warbaahinta awgeed dawlada M. Farmaajo iyo RW Khayre waxey ku guuleysatay arimo ay ku fashilmeyn dawladihii ka horeeyey sida:
1- Inay doorashadii kaga guuleystaan Madaxweynihii iyo Ra’salwasaarihii hore oo heystay awooda iyo dhaqaalaha dalka iyo Musharaxiintii kale ee la tartameysay.
2- Inay helaan taageeradii Bulshada ee ugu badneed dawladihii nasoo maray.
3- In loo arko dawladii ugu wadani-saneed ee soo marta dalka kadib Kacaankii October.
4- In loo arko dawlad ay shacabku leeyihiin oo aan laga laheen dibadda.
5- In Barlamaanka iyo Kutlooyinkiisa mucaaradku ka baqaan la-xisaabtanka iyo Mooshinada Xukuumada, kadib markii ay derbi difaac ka dhigteen Shacabka iyo Saxaafada.
6-In dhammaan Wasiirada Khayre ay khubaro ku yihiin adeegsiga Facebook-ga iyo Twitter-ka, lamana oga in lagu tababaray ama ay horey u yaqaaneen oo shuruud looga dhigay magacaabistooda.
7- In Ingineerka dawlada uu yahay Saxafi ku xeel-dheer adeegsiga Warbaahinta.
8- In ay ku guuleytaan taageerada 90% hay’adaha iyo shirkadaha warbaahinta dalka iyo suxufiyiinta, lana gaarsiiyo in ay hoos u hadasho warbaahinta Mucaaradku.
9- In dawlad-gobaleedyadii ku dhiiran-jiray hanjabaada dawladihii hore ka baqaan taageerada shacabka iyo saxaafada dawladaan.
10- In dawladihii shisheeye ee fara-gelinjiray dalka ka gaabsadaan dawladaan inta ay haysato saxaafada iyo shacabka.
Warbaahinta oo ah seef laba afle ah ayey xakameyn-weyday Xukuumada Khayre gaar ahaan gudaheeda inta aan la gaarin dibadeeda, duduna malaha dareynsi iyo dawaansi, waxaana go’aan adag laga soo saaray Wasiirada iyo Taliyaasha in aysan adeegsan karin Saxaafada iyada oo aan fasax laga qaadan Xafiiska RW, hadii Wasiir loo diiday-na inta ka hooseysa waa weysha gowrac dibi ha quus-qaatee.
Hadaba dawladu ma noolaan kartaa saxaafad la’aan? Shacabku xagey u marinayaan taageerada? Yaa mucaaradka ka difaacaya hadii ay ka aamusaan warbaahinta? Hadii wasiirada laga joojiyo qoraalada baraha bulshada! Maxey taageerayaashu Like-saarayaan, Share-gareynayaan, Comments-saarayaan, Bogaadinayaan? Hadii aysan ilaashan dawladu wixii ay ku liibaantay maxey qorshe kale u heysaa Bulshada oo ay ugu bedelee???
W/Q: Dr. Maxamed Gacal
Wargeyska Ethiopian Observer oo xaqiijiyey in Dowlada Somalia Sarkaal u gacan galisay Itoobiya
Wasiir Juxa oo ka hadlay go’aankii Wasiirada looga mamnuucay isticmaalka Warbaahinta